ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်း
Posted by etone on Aug 25, 2012 in Food, Drink & Recipes, My Dear Diary | 27 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲနဲ့ ငပိထောင်း
ညီမလေးတစ်ယောက်က ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ စားချင်တယ် ပြောပြောနေပေမယ့် အနီးနားမှာ ကော်ရည်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မရှိလို့ ၊ မကျွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ ။ အဝေးကြီးလည်း သွားမစားချင်တာနဲ့ ဒီတပတ်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ လုပ်ကျွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ နှစ်ယောက်စာ ချက်ရင်း ၊ ရွာသူားတွေကို သတိရမိလို့ ၊ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
ပထမဆုံး ဂျုံခေါက်ဆွဲခြောက်ကို ပျော့အိလာစေဖို့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေထဲ ခဏနှစ်ထားပေးရပါမယ် ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေထား အပျော့မာကိုကြည့်ပြီး ခေါက်ဆွဲကို ပြန်ဆယ်ထားကာ … ရေအေးထဲ နှစ်ပြီး ခဏ အအေးခံရပါမယ် ။ ကျွန်မကတော့ ရေအေးနဲ့ အအေးခံတဲ့အပြင် ၊ ရေအေးထဲက ဆယ်ပြီးသား ခေါက်ဆွဲကို စကာထဲထည့်ပြီး …ရေခဲတုံးတွေပါ ခေါက်ဆွဲပေါ်တင်ပြီး … အအေးခံထားလိုက်ပါတယ် …. ။အဲ့လိုမှ အအေးမခံလျှင် ၊ ခေါက်ဆွဲတွေလုံးထွေးပြီး ကပ်ကုန်နိုင်တာကြောင့်ပါ ။
ပြီးတာနဲ့ ဟင်းရည်အတွက် ကြက်သားကို …ပဲငံပြာရည် ၊ ဆား ၊ သကြားနယ်ပြီး … နူးနေအောင် ပြုတ်ပေးရပါမယ် ။ ကြက်သားနူးပြီဆိုလျှင် အသားတွေကို ဆယ်ပြီး အတုံးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် နုတ်နုတ်စင်းပေးရပါမယ် ။ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ကြက်ပြုတ်ရည်ထဲကို စင်းထားတဲ့ အသားတုံးတွေပြန်ထည့် ပြီးလျှင် ကော်မှုန့်ကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီး လိုသလောက်ထည့်ရပါမယ် ။ အဲ့ဒီနောက် မှိုခြောက် ၊ ပန်းခြောက်နဲ့ ၊ sausage တွေကိုလည်း လိုသလောက် ထည့်ပေးရပါမယ် … ၊ ပြီးတာနဲ့ ကြက်ဥ နှစ်လုံးကို အကာရော ၊ အနှစ်ပါရောမွှေထားတဲ့ အရည်ကို ….ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ဟင်းအိုးထဲ ဇွန်း တစ်ဇွန်း နဲ့ .. ဖြည်းဖြည်း ချင်း လောင်းထည့်ပေးရပါမယ် ။ ဒါမှသာ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ အိုးထဲ ကျလာတဲ့ ဘဲဥအရည်က အမျှင်လေးတွေ ဖြစ်စေမှာပါ ။ ဆား ၊ သကြား လိုသလောက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ … ငရုပ်ကောင်းလေးနည်းနည်း ဖြူးထည့်ပေးရပါမယ် ။ ငရုပ်ကောင်းနံ့ လေးမွှေးလာတာနဲ့ ဟင်းရည်အိုးကို မီးပိတ်ပြီး ကန်စွန်းရွက်တွေကို အပေါ်က ဖြန့်ထည့် ၊ အဖုံး ပြန်အုပ်ထားရပါမယ် ။(တစ်ချို့က ငရုပ်ကောင်းကို ပန်းကန်ထဲရောက်မှ လိုသလိုလည်း ထည့်စားတတ်ကြတယ်) ။ ဟင်းအိုးမီးပိတ်ပြီးမှ ၊ ကန်စွန်းရွက်ကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်တာ ၊ စိမ်းနေအောင်လို့ပါ ။ကန်စွန်းရွက် နွမ်းသွားလျှင် စားချင်စရာမကောင်းတော့လို့ပါ ။ သုံးမိနစ်လောက်ကြာတာနဲ့ ဟင်းရည်အိုး အပူရှိန်ကြောင့် ကန်စွန်းရွက်လည်း စားလို့ ရတဲ့ အနေထား ရောက်ပါပြီ ။ ဒါဆိုလျှင် ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ အတွက် ဟင်းရည်ချက်လို့ ပြီးပါပြီ ။
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲနဲ့တွဲဖက်စားရတဲ့ ငပိထောင်းလေးအကြောင်းလည်း နည်းနည်း ပွားပါဦးမယ် … ။ ငပိထောင်းလုပ်ဖို့ ၊ မျှင် ငပိ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း ၊သံပုရာသီး ၊ ငရုပ်သီးမှုန့် နည်းနည်းနဲ့ … ၊ အသားမှုန့် နည်းနည်း လိုပါတယ် ။ ပထမဆုံး မျှင် ငပိကို ကင်ရပါမယ် ။ ကင်တဲ့ နေရာမှာ တူးနေအောင်မကင်ပဲ ၊ မျက်နှာပြင် နီရဲပြီး ၊ ငပိနံ့ လေးထွက်လာလျှင် ရပါပြီ ။ ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်းကို ကြေညက်နေအောင် ထောင်းထားရပါမယ် ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုတော့ မထောင်ခင် အရင်ဆုံး အညှောင့်ချွေပြီး ၊ ဒယ်အိုး အပူထဲ ထည့်လှော်ပေးရပါမယ် ။ လှော်နေတုန်း မီးအရှိန်နဲ့ ငရုတ်သီးက ထပေါက်ပြီး စင်တတ်တဲ့အတွက် မျက်စိထဲမ၀င်အောင် သတိတော့ထားလှော်ရမှာပါ ။ အဲ့ဒီငရုပ်သီးနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို လိုသလောက်ရောပြီးထောင်းရပါမယ် ။ ကြေညက်လာတာနဲ့ငပိကိုပါ ထပ်ပေါင်းထည့်ထောင်းပေးရပါမယ် ။ ( ငပိထောင်းပိုပြီးစားလို့ကောင်းဖို့ ပုစွန်ခြောက်လေး နည်းနည်းပါထည့်ထောင်းလျှင် ပိုကောင်းပါတယ် ) ငရုပ်သီးအကျက်မှုန် နဲ့ ၊ အသားမှုန့်တို့ကိုပါ ရောထောင်းပြီးပြီဆိုလျှင် ၊ ငပိထောင်းလည်း စားဖို့ အသင့်အနေထားရောက်ပါပြီ ။ သံပုရာသီးကိုတော့ စားခါနီးမှ ငပိထောင်း အပေါ်ကနေ အရည်ညှစ်ပြီး တွဲစားပေးရမှာပါ ။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်လျှင် သံပုရာရည်က ချဉ်အရသာထက် ၊ ခါးဖန့်ဖန့် အရသာ ဘက်ကို ပြောင်း သွားနိုင်လို့ပါပဲ ။ လတ်ဆတ်တဲ့ သံပုရာနံ့ လည်း မမွှေးတော့တာကြောင့်ပါ ။
အားလုံးလည်းပြင်ဆင်ပြီးလို့ စားဖို့ အသင့်အနေထားရောက်ပြီဆိုတော့ …. ၊ အအေးခံပြီးရေစစ်ထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲကို အလျှင်ထည့်ရပါမယ် ၊ ပြီးတာနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ကော်ရည်ကိုလောင်းထည့်ပြီး ၊ အပေါ်က ကြက်သွန်ဆီချက်လေး ဖြူးပေးလိုက်လျှင် အိုကေပြီပေါ့နော် ။ ရွာသူားတွေကို ကျွေးချင်ပေမယ့် ၊ ဝေးနေလို့ ပုံလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဟီးဟီး …
အားလုံးပဲ Happy weekend ဖြစ်ကြပါစေနော် ။ ။
ကန်စွန်းရွက် ၊ ပန်းခြောက် ၊တရုတ်မှို၊ ကြွက်နားရွက်မှို နဲ့ sausage တို့ကို အဆင့်သင့်ပြင်ဆင်ထားတာပါ ။
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲရပါပြီ ။ ဆိုင်တွေမှာတော့ ကြက်သားတုံးလေးတွေကို ဟင်းရည်ထဲ ထည့်မမွှေပဲ ၊ မြင်သာအောင် အပေါ်က ဖြူးပေးပါတယ် ။ ဒီထဲမှာတော့ အလွယ်ပဲ အိုးထဲ ထည့်မွှေလိုက်မိပါတယ် ။
နှိပ်စက်တယ် — နှိပ်စက်တယ် — စားချင်စရာ တွေပဲလာလာပြနေတယ် —- ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး အစား အစာတွေက ခေါက်ဆွဲအမျိုးမျိုး ၊ ရှမ်းရေစိမ် ၊ ရှမ်းတို့ဟူးနွေး ၊ မုန့်ဟင်းခါး အမျိုးမျိုး နဲ့ ရခိုင်မုန့်တီ ။ ပြောရင်း စားချင်လာပြီဗျာ ။ လောလောဆယ်တော့ ခေါက်ဆွဲ ထဲက ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ နဲ့ ငပိထောင်း လေးတစ်ပွဲ တီးလိုက်ဦးမယ်ဗျာ ။ ရှလွတ် —( အပီ အပြင် ဆွဲနေသံ )
ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းကို စားသုံးသူအကြိုက် လိုက်ပြီး ဆိုင်ဖွင့် ရောင်းပါလား
ကိုပေ့ အသိတစ်ယောက်ဆိုရင် မန်းတလေးမုန့်တီကောင်းကောင်းသုပ်တတ်တော့ ရန်ကုန်မှာအခြေချပြီး သုပ်ရောင်းနေတာ အောင်မြင်နေတယ်လို့ ကြားရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာရတယ်
အောင်မငှီးးးးးးးးးးးးးးးးး ကိုပေရယ် …. ကြံကြီးစည်ရာ ညီမကို ဆိုင်ဖွင့်ခိုင်းတယ်တော့ ….. ကျားမြီးသာ ဆွဲချင်ဆွဲမယ် .. စားသောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဆိုင်တော့ လုံးဝမဖွင့်ဘူး ….
တစ်ဆွေလုံး တစ်မျိုးလုံး ရန်ကိုကြောက်လို့ပါ …. .. အကြွေးအကြွေးနဲ့အရင်းပြုတ်ရချည်ရဲ့ 
ကျုပ် မဂေါက်သေးခင် ..
ဂျီးဒေါ်ရဲ့ ကော်ရည်လေးကိုတော့ မြည်းစမ်းသွားဘာဒယ် ..
(ပုံကို ကြည့်၊ တံတွေး မြိုချ၊ ဂလု ဆိုပီးဒေါ့ပေါ့)
အန်တီတုန်း က လက်ရာမဆိုးလောက်ဘူးထင်ပါ့။
ကျုပ်တို့ ပြည်ဘက်က ကော်ရည်ကျတော့ အီကြာကွေး
ကို ကြွပ်နေအောက်ကြော်ထားတာလေး ညှပ်ထည့်သဗျ။
ရှာလကာရည်ထဲ ငရုပ်သီးစိမ်း ညှပ်ထည့်ထားတာရယ်..
ငရုပ်ဆီနဲ့ ဂေါ်ဖီရွက် လှီးထားတာလောက်ပါပဲ။
ဗိုက်ဆံ့ သလောက်တော့ စားသွားပြီ
သွားတွေကလည်းမကောင်းဆိုတော့ခတ်ပျော့ ပျော့ ကော်ရည်နဲ့ ဆို
အလွန်ဘဲ စားကောင်းပါကလား ဒေါ်အိတုန်ရေ
ကဲ ခုထမင်းစားချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ ဟင်းအရည်မပါတော့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို ကြည့်ပြီးစားရအောင်
မမ မနော………….. Si Tone အတွက်ချန်ပါဦး
မအိတုံရေ ပုံလေးတွေကြည့်ရတာ အရမ်းကောင်းမယ့်ပုံဘဲလေ။
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကိုတော့ သိပ်ကြိုက်ပေါ့၊ ရန်ကုန်မှာတုံးက ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံနားမှာရှိတဲ့ တော်ဝင်နှင်းဆီက ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို ခဏခဏသွားပြီး စားဖြစ်တယ်လေ။ အဲဒီဆိုင်က ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲလည်း ကောင်းပါ့။
ဟိုအရင်တုံးကတော့ ငပိလေးနဲ့တို့စားပေါ့ နောက်ပိုင်းတော့ သွေးတိုးမှာကြောက်လို့ တို့မစားဖြစ်တော့ဘူးလေ။ အခုလည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင်သွား၍ စားဖြစ်တယ်လေ။
မဟုတ်ရပါဘူး ကိုကြောင်လေးရယ် ….အထင်မကြီးပါနဲ့ …. ကျွန်မဒီဝါလည်း မကျွတ်သေးပါဘူး …. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် ချက်စားဖို့ပျင်းလို့ … ယောကျာ်းယူမယ်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံရှာတာအပြင် ထမင်းဟင်းလည်း ချက်တတ် ၊ အ၀တ်လည်းလျှော် မီးပူလည်း တိုက်တတ်မယ့် လူမျိုးကိုရွေးမလား စိတ်ကူးထားတယ် … ခွိခွိ ။ စိတ်ဝင်စားလျှင် ဆက်သွယ်ပါ ..
(ဟိဟိ …မနောက်တော့ပါဘူး ။ အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် ကျွန်မ ဒီရက်ပိုင်းစိတ်လေလေနဲ့ … အစားသောက်ကိုချည်းပဲ အာရုံကျနေလို့ပါ … )
ကော်ရည် ခေါက်ဆွဲ လေးက
ချက် နည်းလေး သိချင်နေတာနဲ့
အိမ်မှာ စမ်းပြီး ချက်စားကြည့်ရမယ်
ကျုပ်တုံးတာ လူသိမှာစိုးလို့ …
ကိုင်း… မနေနိုင်တော့တဲ့နောက် မေးပါပြီ…
ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲကို ငပိထောင်းနဲ့ ဘယ်လိုတွဲစားရတာလဲ ပြောပြကြပါခမျ….
ကျုပ်ကတော့ ဘယ်လိုစားရမှန်းမသိလို့ ကော်ရည်တဇွန်းစားလိုက် – ငပိထောင်းလေးနဲနဲစားလိုက် လုပ်ပြီးစားပါတယ်။
ကျမက ဦးပါထက်ပိုတုန်းတယ် ။
ရှမ်းခေါက်ဆွဲအစုံ စားဖူးပေမဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲတခါမှ မစားဖူးဘူး။ ရန်ကုန်ဘက်မှာအစားများကြတယ်ထင်ရဲ့။
ငါးပိထောင်းလေးနဲ့ တွဲထားလို့ သားရေမနည်းထိန်းနေရတယ် ။ ကျမသာဆို ငါးပိထောင်းကို တခါထဲ ရောထည့်မွှေပြီး စားပစ်လိုက်မှာ ။
အမလေးနော် ပြောရင်းနဲ့တောင် သားရေကျလာပြီ။
ဦးဦးပါလေရာရေ … နွယ်ပင်ကတော့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲစားရင် ငါးပိထောင်းကိုပါ ရောမွှေပြီး စားလိုက်တာပဲ အဲလိုစားတာက ပိုအရသာရှိတယ်ထင်လို့လေ …
အနော်ရဲ့ဖေးဖဒိတ်ဖုတစ်ခုပေါ့ အရမ်းကြိုက်တယ် အရမ်းရွှိုက်မယ် ရန်ကုန်ရောက်ရင် လသာဖက်သွားသွားပြီး ကော်ရည်စားရတယ် ပြည်ကော်ရည်ကတော့ ဂွတ်ရှယ်
ဖရေဇာနဲ့ ၃၇ ထောင့်ဆိုင်မှာလည်းရတယ် ဒါပေမယ့်မကောင်းဘူး မမအိတုံချက်တာလေး စားချင်လိုက်တာ ဂလု ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
If Etone is still single, the man who will get married to her will be the most luckiest man in the world:)
စိတ်ချမ်းသာစရာကော့မန့် လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ……. ။ အဟိ
ဒါပေသိ …. ဒီတနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှ အစွံမထုတ်လျှင် ၊ ဟိုင်းသွားတော့မှာမို့ … အပူတပြင်း လိုက်ရှာနေရပါကြောင်း …. ။ ဟိဟိ ……
ကြော်ငြာပါသည့်နေ့ မှ တစ်လအတွင်း လျှောက်ထားပါရန် နှင့် … အထူးဆုအနေဖြင့် ယောက္ခမမှ တိုက်ခန်း တခန်း လက်ဖွဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း .. ဟိဟိ
ရှိသတိ အမှန်စဉ် တစ် ၊ နှစ် ၊ သုံး
တစ်ချို့ကတော့ ကန်စွန်းရွက်အစား ပဲပင်ပေါက်သုံးတယ်
အိမ်မှာလုပ်ရင်တော့ ငပိထောင်းမဟုတ်ပဲ ငပိသုတ်လို့ပြောရမယ်ထင်တယ် ကြက်သွန်နီနဲ့ ပုစွန်ခြောက်ပါရောသုတ်ထားတာ
အပေါ်က ကြော်ငြာကိုလည်း လက်ဆင့်ကမ်းပေးပါ့မယ်
အန်တီအိက ကြက်သားကို ရှောက်ကော၊ပါးကော လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်မဆလာ၊
နာနတ်ပွင့် တို့နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲနဲ ဓါးပြားရိုက်ပြီး ဆီသတ် ပြုတ်လိုက်တာ…
ပိုမွှေးတာပေါ့နော်..ပုဇွန်တို့ ကင်းမွန်တို့လဲ ထည့်လို့ရတယ်…
နောက်ဆုံးကျ ကော်ရည်ထည့်ပြီးရင် ကြက်သွန်ဖြူကြော်ကို
ထောင်းပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲ ထည့်မွှေလိုက်တာရယ်…ပိုမွှေးတယ်…
ကန်ဇွန်းရွက်၊ပဲပင်ပေါက်၊ ရေမုန်ညင်း စတာတွေကို ပြုတ်ပြီး သီးခြား ထားတာ
ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်စာဘဲချက်စားတာ..ညီမလေးနဲ့ ဟုတ်လို့လား…
ကော်ရည်ကောက်ဆွဲဆို အရမ်းကြိုက် တစ်ခါစား အနည်းဆုံး (2)ပွဲပဲ …
ဒီနေ့တော့ ထမင်းစားပြီးလို့ တစ်ပွဲပဲ စားသွားပါတယ်ညီမရေ ..
ဗိုက်ဆာတော့မှ ပြန်လာစားတော့မယ်နော် ….